Budata CCleaner maka Windows
Free Budata maka Windows (34.50 MB)
CCleaner bụ ihe ịga nke ọma na usoro njikarịcha na usoro nchekwa nke nwere ike ịme nhicha PC, osooso kọmputa, iwepụ mmemme, nhichapụ faịlụ, nhichapụ ndekọ, nhichapụ na-adịgide adịgide na ọtụtụ ndị ọzọ.
A na-enye ndị ọrụ Windows PC ụdị abụọ, CCleaner Free (Free) na CCleaner Ọkachamara (Pro). Lelọ ọrụ CCleaner Ọkachamara, nke chọrọ igodo, gụnyere atụmatụ ndị dị ka ule ahụike PC, mmelite mmemme, osooso PC, nchedo nzuzo, nlekota oge, ndokwa nhicha, melite akpaaka na nkwado. Nwere ike ịnwale nsụgharị CCleaner Pro nefu maka ụbọchị 30. Nchịkọta CCleaner Na-akwụ ụgwọ, na aka nke ọzọ, na-enye ngwa ngwanrọ kọmputa na nzuzo na ọ nweghị ndụ.
Esi Wụnye CCleaner?
CCleaner na-adọta uche dị ka usoro nlekọta na usoro njikarịcha nefu nke mepụtara maka ndị ọrụ chọrọ iji kọmpụta ha na arụmọrụ ụbọchị mbụ ha. Na mgbakwunye, ndị ọrụ Windows na-eji mmemme a akpọ CCleaner dị ka ihe eji ehicha kọmputa.
Site na enyemaka nke CCleaner, ị nwere ike ime ka sistemụ gị kwụsie ike ma rụọ ọrụ nke ọma site na ihichapụ faịlụ ndị na-enweghị isi na kọmputa gị ma ọ bụ mezie njehie na ndekọ. CCleaner, nke bụ otu nime sọftụwia kachasị amasị nụwa maka nhicha sistemụ, nwere ngwa ọrụ ndị dị mkpa iji mee ngwa ngwa kọmputa.
A kwadoro CCleaner, nke nwere njirimara ọrụ doro anya ma dị mfe, nke ndị ọrụ kọmputa nke ọkwa niile ga-eji. Site na mmemme a, nke nwere Cleaner, Registry, Tools and Settings menus na menu ya, ị nwere ike ịrụ ọrụ niile ịchọrọ site na taabụ ịchọrọ iji.
Etu esi eji CCleaner?
Nzube CCleaner, nozuzu, na-ekpebi ihe ndị dị na kọmpụta gị nke na-ewere ohere diski na-enweghị isi maka gị, na-ehichapụ kọmputa gị site na iji otu ịpị ma nye gị ohere ịmepụta ohere nchekwa ọzọ. Nụzọ dị otú a, ọ bụghị naanị na ị ga-enweta ohere nchekwa ọzọ, kamakwa ịbawanye arụmọrụ nke kọmputa gị.
Site na mmemme ahụ, njehie ndị dị nokpuru ndekọ kọmputa gị ma belata arụmọrụ gị na-enyocha nokpuru ngalaba ndekọ. DLL faịlụ njehie, ActiveX na klas nsogbu, ejibeghi faịlụ extensions, installers, aka faịlụ na yiri ọdịnaya ga-apụta mgbe i scanomi na-kpochara na otu click, na-enye gị ohere iji kọmputa gị na nnọọ elu arụmọrụ.
Nikpeazụ, nokpuru ngalaba ngwaọrụ; Site nenyemaka nke ngwaọrụ dị iche iche dị ka mgbakwunye / wepu mmemme, ngwa mmalite, onye na-achọ faịlụ, weghachite usoro na mbanye nhicha, ị nwere ike ịbawanye ọsọ buut nke sistemụ gị, wepu mmemme na-enweghị isi ma ọ bụ nke a na-ejighi na kọmputa gị, na njikwa usoro weghachite ntọala.
Otu nime nnukwu uru nke CCleaner maka ndị ọrụ Turkey bụ ịrụ ụka adịghị ya na nkwado asụsụ English. Nụzọ dị otú a, ị nwere ike mfe mezue niile arụmọrụ ị chọrọ ịrụ na-enyemaka nke usoro ihe omume na ị nwere ike mfe na-eso ihe ị na-eme mgbe ọ bụla nzọụkwụ.
Na mmechi, ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ngwa kọmputa gị ma jiri kọmputa gị na arụmọrụ ụbọchị mbụ ya, mmemme a bụ ihe ịchọrọ.
Free na-akparaghị ókè ojiji.
Nịbụ a mma usoro ihicha ngwá ọrụ na a pụrụ ịdabere na ruo ọtụtụ afọ.
Nọgidere mma ịgụ isiokwu ikike.
Enweghị nkwado nhicha maka mmemme ụfọdụ a na-ejikarị.
Nha faịlụ: 34.50 MB